Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → janvier → 16 → Fianarantsoa : Nisy nandoro indray ny foibe iraisam-paritry ny Jiro sy Rano Malagasy ao Tsianolondroa
Niniana nodorana ? Nampametram-panontaniana ny maro ity tranga fahamaizan’ny orinasa Jirama eto Fianarantsoa ity. Maro tamin’ireo mpamonjy voina sy tamin’ny olona tonga teo amin’ny toerana nisian’ny fipoahana no naheno fofona solika (essence). Tsy fifandonana herinaratra koa anefa no nahatonga ny fahamaizana araka ny nambaran’ny teknisianina ao ihany. Efitrano telo mifanalavitra ihany koa no nipoiran’ny firehetana ary nahenoana fipoahana mitovy avokoa. Misy mpiambina telo tonta ny vavahady miditra ao amin’ity orinasa ity ary nanamarika ny iray tamin’ny mpiambina fa voarakitra an-tsoratra avokoa ny olona mivoaka sy miditra ao amin’ny orinasa, eny fa na ireo mpiasa mirava alina aza. Raha jerena ankapobeny ny fipoahana dia avy ao anatin’ny trano avokoa. Mampanontany tena hatreto hoe inona no antony ary iza no mety ho nahavita izany. Ny zavamisy kosa dia ao anatin’ny manao “Audit” na fanadihadiana sy fanaraha-maso lalina ny asa sy ny fandehan-draharaha ao amin’ity orinasa ity ny iraky ny fitondrana foibe amin’izao fotoana nitrangan’ny fahamaizana izao, ary vao tamin’ny herinandro mialohan’izao no nitsidika sy nanao be midina taty ireo tale avy amin’ny foibe nasionaly notarihin’ny tale jeneraly sy ny tale jeneraly lefitry avy ao amin’ny ministeran’ny Angovo nijery akaiky ny momba ity orinasa ity. Ny fanadihadiana natao ihany koa no nahafantarana fa an-tapitrisany maro ny vola tokony hiditra ain’ny orinasa no tsy hita. Ireo antony ireo no mahatonga ny baraingo maro napetraky ny ankamaroan’ny olona hoe niniana nodorana ve. Ny fanadihadiana no andrasana hahafantarana ny tena marina.